Budata CSR Racing 2 APK maka Android
Budata CSR Racing 2
Budata CSR Racing 2,
CSR Racing 2 bụ nke kacha mma egwuregwu ịgba ọsọ egwuregwu na ikpo okwu gam akporo, ma nke anya ma na usoro nke egwuregwu. Anyị na-anwa igosi na anyị bụ ndị kacha mma na-agba ọsọ nobodo ahụ na egwuregwu ahụ, nke gụnyere ihe karịrị 50 ikikere na nụzọ magburu onwe ya gbanwere agbanwee ọsọ ọsọ. Nezie, ọ dịghị mfe iji nke kacha mma sọọ mpi n isi.
Negwuregwu ebe anyị na-esonye negwuregwu na-adọrọ mmasị, agbụrụ na-agba ịnyịnya nwere ihe karịrị 50 ikikere ụgbọ ala sitere naka ndị nrụpụta ụgbọ ala kachasị amasị ụwa, gụnyere Ferrari, McLaren, Bugatti, Lamborghini, Pegani, Koenigsegg, ndị otu ma ọ bụ megide ndị enyi anyị, yana gburugburu Anyị nwere ike ịsọ mpi na ndị egwuregwu. Anyị nwekwara ohere ikori na ndị egwuregwu na-ebi ndụ, mepụta otu, ma sonye na mmemme ịntanetị. E nwekwara a ọrụ mode ebe anyị na-amalite dị ka rookie na-akwụsị dị ka a ọkachamara Dọrọ racer.
Na CSR Racing 2, nke na-adọta uche na ngbanwe ya na nhọrọ nhazi nke ọma, anyị nwere ike igosipụta ụgbọ ala ndị anyị nwetara na ihe ịga nke ọma anyị rụzuru na agbụrụ dị na gallery anyị. Carsgbọ egwuregwu na-adọrọ adọrọ na-echere anyị na nnukwu ụgbọala anyị, dị njikere iji ya mee ihe mgbe niile.
Onye mbipụta egwuregwu ahụ, Zynga, kwupụtara na nso nso a na mmelite ga-abịa na egwuregwu ahụ, nke ha kpọrọ CSR2 Legends. Mgbe ị na-enye ozi ọma na a ga-agbakwunye ụgbọala ọhụrụ 16 na egwuregwu ahụ na mmelite ọhụrụ ahụ, ekwuru na enwere ike ịhazi ahazi na egwuregwu ahụ. Nikwu ya nụzọ ọzọ, ndị egwuregwu ga-enwe ike ịgbanwe ụgbọ ala ha zụrụ ma mee ka ha dịkwuo mma.
Na mgbakwunye na nhazi, ụgbọ ala ndị dị egwu dịka CSR 2, nke nwere ọtụtụ ụgbọ ala dị egwu, McLaren F1, Lamborghini Countach na Saleen S7 Twin Turbo na mmelite Legends ga-adị na egwuregwu ahụ ma a ga-enye onye ọ bụla.
CSR Racing 2 Ụdịdị
Bike Racing 2018 bụ egwuregwu ịgba ọsọ nke ndị egwuregwu ekwentị na -egwu nefu. Asọmpi ọgba tum...
Rider 2018 na -adọta uche anyị dị ka asọmpi moto ebe ị nwere ike gosipụta na egwu siri ike....
Egwuregwu ụgbọ ala 2018 nke enyere ndị egwuregwu ịgba ọsọ ekwentị bụ nefu. Egwuregwu ịgba ọsọ a na...
E wepụtara Supercar Racing 2018, otu nime egwuregwu ịgba ọsọ ekwentị na Google Play nefu. Supercar...
Rush Rally 3 bụ ihe kachasị ebudatara ma kpọọ egwuregwu ịgba ọsọ egwuregwu na mkpanaka. M ukwuu...
Chọrọ igwu egwu ezi uche ọduọ egwuregwu na mobile nelu ikpo okwu? Ọ bụrụ na azịza gị bụ Ee, m...